Maxay Ka aaminsan yihiin Suuqgeeyayaasha Baraha Bulshada | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Maxay Suuqgeeyayaasha Baraha Bulshada ay Dhab ahaan uga Fikiraan Guriga Naadiga
Maxay Suuqgeeyayaasha Baraha Bulshada ay Dhab ahaan uga Fikiraan Guriga Naadiga
Waa maxay waqti xiiso leh oo ay u ahayd Clubhouse, madal-bulsheed-maqalka tooska ah oo ku raaxaysanaya safar degdeg ah oo laga soo bilaabo buuqa badan waa in ay lahaadaan app ilaa Silicon Valley maal-gashadayaasha sed si ay u cunaan eedaysanayaasha argagaxa leh ee ka dhanka ah astaamaha nuqulka, dhammaan muddo bilo ah gudahood .
Difaaca Clubhouse, karbaashkan ee ra'yiga dadwaynaha ayaa u dhigma koorsada. App-ka cusub ee baraha bulshada ee kulul waxa uu ku qasban yahay in uu dhex maro calal-ka-maal- taajir-ilaa-Twitter-ka jeesjeeska ah (RIP, Google Plus).
Laakiin dhammaan sheeko-sheekeysigan ayaa adkeyn kara in la kala saaro buun-buuninta (ama nacaybka) runta ah ee suuqgeynayaasha warbaahinta bulshada ay u baahan yihiin inay ogaadaan: Clubhouse dhab ahaantii miyuu mudan yahay in la eego, mise tani miyay ka fiican tahay in la iska indho tiro?
Waxaan u leexannay khabiirkayaga guriga - Nick Martin, Hootsuite's Global Interviewt Interfacet Specialist - si aan u ogaano haddii calaamaduhu ay fiiro gaar ah u leeyihiin Clubhouse.
Bonus: Hel qaab bilaash ah, qaab falanqayn tartan la beddeli karo si aad si fudud kor ugu qaaddo tartanka oo aad u ogaato fursadaha summadaada aad hore ugu soo jiidi karto.
Waa maxay faa'iidooyinka Clubhouse?
Waxaa jira shay si lama filaan ah u soo jiidanaya maqalka - kaliya u fiirso kobcinta podcast-ka ee tobankii sano ee la soo dhaafay - iyo inta lagu jiro waqtiga go'doominta Covid, la yaab ma leh Clubhouse inuu soo baxayo maalmihiisii ​​hore. Waxaan u baahi qabnaa isku xirnaanta iyo maqalka dadka kale.
Dhagaystayaasha bulshadu waxay jecel yihiin nuxurka "nool".
Clubhouse asal ahaan waa casriyeyn casri ah oo raadiyaha hadalka ah: toos ah, aan la tafatirin, oo leh suurtagalnimada ka-qaybgalka ikhtiyaarka martida loo yahay. Noocyada u arka rafcaanka aaladaha kale ee baahinta tooska ah sida Facebook Live, Linkedin Live, ama Instagram Live, dhacdo maqal ah oo la mid ah ayaa laga yaabaa inay ku habboon tahay.
Fursad aad kaga fikirto waxa sumaddaadu "u dhawaaqdo" sida
Barnaamijyada maqalka ah sida Clubhouse sidoo kale waa fursad aad uga fikirto astaantaada muuqaal cusub, oo aad naftaada ugu soo bandhigto adduunka qaab cusub. "Waa wax xiiso leh in laga fikiro: waa maxay calaamadeenu u egtahay? Waa maxay codkayagu dhex-dhexaadintan? Ayuu yidhi Nick. "Tani waxay noqon doontaa tallaabada xigta ee calaamado badan."
Taas oo la yiraahdo, waxaa jira caqabado waaweyn oo leh maqal toos ah oo u baahan qorshe iyo xeelad si looga gudbo.
Waa maxay cilladaha Clubhouse?
Nick, waligiis baaraha warbaahinta bulshada ee cabsida leh, ayaa naftiisa ku dhex milmay Clubhouse hal usbuuc ama wax ka badan si uu si dhab ah isugu dayo inuu fahmo. Xukunka? Clubhouse kaliya uma soo jiidin isaga. "Waan jeclaa fikradda, laakiin ma aysan haysan wax igu celinaya inaan dib ugu soo laabto wax badan," ayuu yidhi.
Talooyinka nuxurka xad dhaafka ah
Algorithm-ka hooseeya ama laga yaabo inuu jabay ayaa soo jeedinayay waxyaabo aan soo jiidasho lahayn ("Waxaan ku dhammaaday wada-hadallo badan oo Jarmal ah si uun," wuu qoslaa). Markii uu soo booday qolka, way adkeyd in la fahmo waxa socda, iyada oo martigeliyayaal badan aysan bixinin xaalad caadi ah.
"Waxaad u baahan tahay inaad buuxiso macnaha guud. Dareenka dadku aad buu u gaaban yahay. Haddii aanad isla markiiba qabsan karin, waad luntay, ayuu yidhi Nick. "Taasi waa waxa aan ka helay Clubhouse: ma jirin wax la qabsado."
Noocyada warbaahinta bulshada, gaaritaanka xaq u dhagaystayaashu waa muhiim. Ugu yaraan hadda, tani waxay u muuqataa mid adag in lagu sameeyo Clubhouse. Waxayna qaadan kartaa wakhti in dhagaystayaashaadu helaan aad.
Anshaxa aan caddayn ee Qolalka
Sidoo kale mar walba ma cadda waxa ay tahay hab-dhaqanka qol kasta: xubnaha dhagaystayaashu ma lagu soo dhaweeyay inay faallooyin ku soo gudbiyaan ama maya?
"Waxay dareemaysay in aad maqasho qof talefankiisa baska ku hadlaya, sida adiga oo wada sheekaysiga badhtanka ku jira," ayuu yidhi Martin.
Tani waxay dib-u-dhac ku noqon kartaa summadaha rajaynaya inay dhegaystayaashooda ku mashquulaan wada sheekaysiga. Waxa laga yaabaa inaad waydo jawaab celin qiimo leh haddii kuwa raacsani aanay caddayn sida loo bixiyo.
Ka-saariddu waxay ka dhigan tahay dhegaystayaal yar
Qaabka gaarka ah ee Clubhouse-ka-kaliya ayaa siinaya goobta dareen xiiso leh, VIP-laakin dhinaca hoose ee taasi waa in asxaabtaada ama xiriiradaadu aysan halkaas joogin si aad ula wadaagto. (Waxoogaa flop ah oo ciddinaya qaybta "bulshada" ee warbaahinta bulshada.)
Inta badan noocyada, kobcinta daawadayaasha sida ugu badan ee suurtogalka ah iyo gaaritaanka macaamiisha cusub waa qayb muhiim ah oo ka mid ah istaraatiijiyadooda warbaahinta bulshada. Tani way ku adkaan kartaa in lagu sameeyo abka gaarka ah sida Clubhouse.
Ma jirtaa beddelka khubarada warbaahinta bulshada ee Clubhouse sida ka wanaagsan?
In kasta oo tiro badan oo ka mid ah aaladaha tartamayaasha iyo astaamaha ay soo baxayaan ka dib guushii Clubhouse, caqabada hormoodka ah ilaa hadda waa Spaces, aaladda maqalka ee cusub ee Twitter.
"Waxaan u maleynayaa in Clubhouse uusan awoodi doonin inuu la tartamo boosaska," ayuu yiri Nick. Faa'iidada ugu weyni waa in lagugu xidhay liiskaaga dabagalka, si aad u hesho bulsho ku dhex dhisan oo ku hadasha iyo dhegaystayaal oo aad horeba u taqaanay.
"Waan garanayaa waxa ay ka hadlaan, waan ogahay waxa ay tahay astaanta shakhsi ahaaneed ee internetka, waxaan haystaa fikrad fiican oo ku saabsan waxa ay ka hadlayaan," Nick ayaa yidhi. "Waxaan dareemaya in yar oo raaxo leh inaan kor u qaado gacantayda sababtoo ah waxaan leenahay xiriirkaas."
Sidee summadaha u isticmaali karaan maqal-soo-dejinta habka saxda ah?
Haddii aad weli xiisaynayso inaad tijaabiso Clubhouse (ama meel kasta oo kale oo maqal ah ama muuqaal ah) astaantaada, xeelad yar oo aad kaga gudubto dhibcaheeda daciifka ah waxay aadi kartaa waddo dheer.
Ku fidi nuxurka kale
Marka doodahaaga webinaarka ee habaysan ama dhijitaalka ah uu dhamaado oo su'aalihiina ay sii socdaan, u gudub qolka maqalka si aad u sii wadato dood dhexdhexaadin ah oo qaab caadi ah, oo qarsoodi ah.
Ka fakar sida dib u soo celinta waayo-aragnimada ku-meel-gaadhka ah ee ku-meel-gaadhka ah ka dib seminaarka shirka, adoo sii wada sheekeysiga xitaa ka dib markii xiddigga bandhiggu uu tago.
Sii macnaha joogtada ah
Mid ka mid ah mashquulka weyn ee guud ahaan nuxurka tooska ah ayaa ah in la qaabilo dadka soo galaya kala bar: sidee ayaad qof ula qabsan kartaa adiga oo aan ku soo celin naftaada ama bilaabin bilowga?
Ka fiirso idaacadaha idaacadaha ama barroosinayaasha wararka, kuwaas oo ku ridi doona jumlad macne leh oo degdeg ah hadalkooda inta lagu jiro baahinta ("Haddii aad nagu soo biirayso…").
Ka faa'iidayso sifooyinkeeda gaarka ah
Cod-ku-soo-celinta waxay u ogolaataa xubnaha dhagaystayaasha inay kor u qaadaan oo ay uga qaybqaataan si aysan u awoodin webinars ama podcasts, markaa ka faa'iidayso sifadan gaarka ah oo ku dhiirigeli su'aalaha iyo ka qaybgalka. Waxa aad doonaysaa in ay noqoto sheeko, ma aha oo kaliya in la baahiyo.
Kaliya ha baal marin
Bandhigyada tooska ah waxay u ekaan karaan dadaal la'aan, laakiin kuwa ugu fiican ayaa dhigay aasaaska guusha muuqaalka gadaashiisa.
Hogaaminta bandhigga, waqti ku bixi qorsheynta wada hadalka (iyo inaad ballansato martida ama martigeliyayaasha): Waa maxay qodobbada hadalka ee muhiimka ah ee aad ku dhufan doonto? Halkee wax ka bilaabaysaa, iyo halkee tahay habka ugu wanaagsan ee wax loo soo koobo? Uma baahnid inaad qorto qoraal, laakiin khariidad waddo si ay kuu hagto waxay kaa caawinaysaa in arrimuhu aad uga fogaadaan mawduuca.
Ka faa'iidayso waxa ku jira
Marka ay dhacdadu dhammaato, shaqadu waa inaanay dhammaan. Ma jirtaa hab aad ku xidhidhdo nuxurkaaga weyn si ay kuwa kale ugu raaxaystaan ​​xaqiiqada ka dib? Martin waxa uu soo jeedinayaa in qodobada ugu muhiimsan ee laga hadlo lagu daro dunta Tweet, boostada blog ama email qarax si loo hubiyo in ay ku sii noolaan karto.
Qaar badan oo falsafado ah oo laga helayo qulqulka fiidyaha tooska ah ayaa lagu dabaqi karaa maqalka, sidoo kale, eeg kala-soocidayada dhamaystiran ee hababka ugu wanaagsan halkan.
Sidee ku ogaan kartaa in Clubhouse ay ku habboon tahay sumaddaada?
Si kasta oo ay tahay inaad u quusto goobta cusub ee dhalaalaysa oo aad dhammaantiin siiso, waxaa jira su'aalo muhiim ah oo ay tahay in maamulayaasha warbaahinta bulshada ay is weydiiyaan ka hor inta aysan si qoto dheer u gelin.
Beeshaadu ma joogtaa?
Haddii aad ka dhisayso dhegeyste meel eber ah, taasi waxay noqonaysaa fuulid tartiib ah. Clubhouse waa martiqaad-kaliya, markaa way adagtahay in la jiido taageerayaashaada iyo taageerayaashaada si guud. "Waxay qaadataa wakhti in la dhiso bulsho mana garanayo in bulshadu hadda jirto iyo in kale," ayuu yidhi Martin.
Miyay mudan tahay inaad waqti ku lumiso goobaha kale?
Ugu dambayntii, in aad si dhab ah uga hawl gasho madal waxay qaadataa wakhti. Oo waxaa jira saacado badan oo keliya maalintii - miyay mudan tahay inaad waqti ka qaadatid wakhtiga aad ku bixin karto ka jawaabista faallooyinka Instagram ama la socoshada sheegista Twitter?
Haddii aad dareento FOMO ama wax la mid ah waxaa laga yaabaa inaad waydo inaad gaarto dhagaystayaal qiimo leh adiga oo aan gudaha u gelin Clubhouse-ka, waxaa xusid mudan in 98% isticmaalayaasha shabakad bulsho kasta oo la siiyay ay ku jiraan wax ka badan hal… Instagram, sidoo kale.
"Haddii suuqleydu ay diiradda saaraan hal ama laba ka mid ah shabakadaha waaweyn, weli waxaad gaaraysaa qof walba," Nick ayaa yidhi.
Ma ku habboon tahay yoolalkaaga warbaahinta bulshada?
Clubhouse waxay noqon kartaa mid waxtar leh haddii yoolalkaagu ay ku saabsan yihiin wacyigelinta astaanta ama fikirka-hoggaanka. Way ku fiican tahay inaad magacaaga halkaas ka hesho, ama aad naftaada dhigto xarunta wada hadalka warshadaha gaarka ah.
Laakiin, haddii yoolalkaaga astaantaada ay ku saabsan yihiin wadista taraafikada, beddelidda hogaanka, ama iibinta, tani ma noqon karto meesha ugu faa'iido badan ee aad waqtigaaga ku qaadato.
Ma u baahan tahay xoogaa caawimo ah si aad u soo koobto xeeladahaaga warbaahinta bulshada? Fiiri qaabkayaga istaraatijiyad bulsho si aad u abuurto qorshe wax ku ool ah astaantaada.
Xukunka: Ma u baahan tahay inaad summadaada geliso Clubhouse?
Inkastuu hore ugu sugnaa #kooxaha, Nick wuxuu kula taliyaa maamulayaasha warbaahinta bulshada inay siiyaan Clubhouse fursad ay ku arkaan sida ay u shaqeyso.
"Tag tijaabi, kaliya ha u gacan haadin sidii wax aan jirin. Dhegaystayaashaada gaarka ah ayaa laga yaabaa inay ku raaxaystaan, waxaana laga yaabaa inaad hesho wax si sax ah u shaqeeya, ayuu yidhi Martin.
Furaha, si kastaba ha ahaatee, waa inaadan aad u dheerayn haddii aysan kugu habboonayn. "Haddii aad guul dareysato, dhaqso u fashilanto. Soo ogow haddii aanay shaqaynayn, ka dibna ha sii wadin inaad samayso.”
Ku badbaadi wakhtiga aad ku maaraynayso joogitaankaaga warbaahinta bulshada Hootsuite. Mid ka mid ah dashboard-ka waxaad daabacan kartaa oo aad jadwaleysan kartaa qoraallada, hel beddelaadyo khuseeya, ka qaybgeli dhagaystayaasha, cabbiri kartaa natiijooyinka, iyo in ka badan. Isku day bilaash maanta.
Fahamka Google Ads Impression Share
Sida loo hagaajiyo qaladka "Qalabka la riixi karo ee aadka ugu dhow" (3 hab)